"Art of War" Atụmatụ ndị agha bụ Nextzọ ọzọ iji weghara Ahịa | Martech Zone
Asọmpi mkpọsa ahịa na-aka ike ụbọchị ndị a. Na nnukwu egwuregwu dị ka Amazon na-achịkwa e-azụmahịa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike iji mee ka ọnọdụ ha sie ike n'ahịa. Ndị isi ahịa na ụlọ ọrụ e-commerce kachasị elu n'ụwa anaghị anọdụ n'akụkụ naanị na-enwe olileanya na ngwaahịa ha ga-enweta traction. Ha na-eji Art nke agha usoro agha na ụzọ iji chụpụ ngwaahịa ha n'ihu onye iro. Ka anyị tụlee etu esi eji atụmatụ a weghara ahịa…
Ọ bụ ezie na ụdị ndị na-ewu ewu na-etinye oge na akụ na ụba buru ibu na nnukwu ụzọ nke okporo ụzọ dị ka Google, Facebook na weebụsaịtị ndị ọzọ nwere mmekọ, ndị ọhụrụ batara na ọnụahịa mkpọsa nwere ike ịnwe oke na nhọrọ mgbe ha na-anwa ịgbasa ahịa ha. Ọwa ndị a na-asọ mpi nke ukwuu, ma dịkwa oke ọnụ iji soro ụzọ ọ bụla bara uru.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha ejiri atụmatụ atụmatụ agha gbakwunyere n'ahịa ahụ, ha nwere ike itinye ego na blọọgụ pụrụ iche na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche echere, ha niile na-eji ndị na-eme ihe. Usoro a na-enye ohere ihe bụ otu oge obere ụlọ ọrụ iji mee ka mmata mara nke ọma ma bulie ego ha ga enweta. Ọganihu na mmụba na mmata nke ọma ga-enyefe onwe ya n'aka onye na-abanye n'ahịa, jiri nwayọọ nwayọọ na-emepe ikike ịmalite ụdị ndị isi na ntanetị na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọ dị oke egwu ugbu a, karịa karịa mgbe ọ bụla, ilekwasị anya na ndị asọmpi. Asọmpi dị oke egwu ma na-agbanwe agbanwe oge niile, n'ọtụtụ akụkụ n'ihi na ihe mgbochi ịbanye maka ntanetị n'ịntanetị pere mpe. Mana enwere ike ile nke a anya dika ohere. Ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ yinye ụlọ ọrụ anaghị amata ruo mgbe ọ ga-egbu oge na onye na-azụ ahịa ahịa ọhụrụ na-abanyekarị na ntanetị n'ịntanetị. Ndị a okpuru nwere ike bụrụ isi iyi nke asọmpi na titans nke ụlọ ọrụ n'ime afọ ole na ole.
Olee otú nke a si malite?
Icheta na Walmart bụ nnukwu ihe atụ nke mmetụta atụmatụ aghụghọ agha nwere ike ịnwe. N'ime afọ 90, Walmart atụghị ụjọ na Target nwere ikike iwepụ ndị ahịa n'ebe ha nọ. Nzọụkwụ Walmart n'oge ahụ agaghị ekwe ka Target mpi. Agbanyeghị, Target bụ isi. Ebumnuche maara naanị otu ụzọ isi gafere n'ahịa nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa bụ ilekwasị anya na ụdị nhọrọ ndị ha chọrọ ịchị. Ka oge na-aga, Target zuru ndị ahịa Walmart zuru site n'ilekwasị anya na ọrụ ego na ngalaba ejiji.
Usoro agha ndị flank ghọrọ ihe dị oke irè maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ndị na-eduga ngalaba ụlọ ahịa na-efunahụ ndị mbata ọhụrụ na ntanetị na '80s na' 90s. Originallylọ ọrụ ahụ na-ere nnukwu nhọrọ nke ma arịa ụlọ na eletrọnịkị, mana ọnụ ahịa ịchekwa ngwongwo na ụlọ ahịa ahụ dị elu, uru ha ritere abụghị. Ya mere, ụlọ ahịa malitere iwere elektrọnik na arịa ụlọ n'elu shelf, mana ha chọpụtara na nke a dugara na mbelata nke ndị ahịa, nke mechara duga ire ahịa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọpụta ike nke ịzụ ahịa n'ịntanetị, nke mere ka ndị ọhụrụ batara n'ahịa ahụ merie ahịa ma wepụ ihe bụbu ụlọ ọrụ e-commerce na-eduga.
Nke a metụtara ahịa dijitalụ n'otu ụzọ ahụ.
Ugbu a ihe ọ bụla ị ga-achọ nwere ike ịchọta n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa dị ka Walmart na Target ka na-enwe nnukwu akụkụ nke ahịa, ụlọ ọrụ na-achọpụta na ọ na-esiri ya ike karịa mgbe ọ bụla ịsọ mpi na ịntanetị nke obere ndị na-ere ahịa.
Kedu ụfọdụ ndị na-egbu egbu?
Ile anya na uwe elu ụmụ nwoke bụ ụzọ dị mma iji ghọta ka ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike iji nye ụlọ ọrụ mgbasa ozi ezubere iche ka ha ree karịa ụlọ ahịa na-eduga. Ọ dị mfe iche na ụlọ ahịa ndị dị ka Macy, Nordstrom na JCPenney na-ere ihe ka ọtụtụ na uwe elu ụmụ nwoke. Ma, ụlọ ọrụ ndị nwoke na-eji ejiji taa dịka Bonobos, Club Monaco na UnTUCKit na-agbanye ngwa ngwa n'ahịa ha.
Companieslọ ọrụ ndị a na-ahụ maka uwe ụmụ nwoke ndị a kpọtụrụ aha na-enweta nsonaazụ n'ahịa, ọkachasị site na blọọgụ pụrụ iche, iji ruo ndị na-ege ntị ọhụụ, ha niile na -emepụta mmekọrịta mmekọrịta na igbe, mana ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị elu. Iji maa atụ, UnTUCKit bụ naanị ụlọ ọrụ uwe elu ụmụ nwoke na-enye Burstool Egwuregwu, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke kpọtara ihe karịrị nde mmadụ 6 webụsaịtị webụsaịtị naanị ọnwa iri na abụọ gara aga.
Uwe nwoke abụghị naanị otu ụdị ụzọ a ka eziokwu. Mgbe ị na-ele anya na uwe ụmụ nwanyị, ị ga - ahụ ụdị ọnọdụ a dịka ụlọ ọrụ ọhụụ batara n’ahịa ahụ ma maa aka mgba megide Nordstrom na Macy, ndị na - ere ngwa ahịa ụmụ nwanyị. Thirdlove, Yandy, na WarLively chigharịrị ihe karịrị nde mmadụ 50 pụọ na ndị isi na saịtị ha naanị site n'ịrụ ọrụ nke ọma na Facebook. Nordstrom hụrụ na okporo ụzọ ha ajụla mgbe SecondLove malitere leveraging Cupofjo dị ka isi iyi okporo ụzọ siri ike.
Isi ihe dị ebe a bụ ndị abata ọhụụ abụghị naanị asọmpi, ha na-emeri site na iji mgbanwe dị na isi mmalite nke okporo ụzọ, yana ilekwasị anya na usoro ezubere iche na mpaghara ebe ndị egwuregwu ọdịnala anaghị eche ịga, ma ọ bụ na-adịghị ngwa ngwa chịkọta akụ.
Ga nnukwu igbe na-echekwa ikpeazụ?
Ugbu a achọpụtala nsogbu ahụ, ụlọ ahịa ngalaba ga-echedo azụmahịa ha site na ịgbachitere isi ihe atọ: oke, okporo ụzọ na ika / mmekọrịta.
Oke- Echekwala naanị na ndị na-ere igbe buru ibu bụ naanị isi iyi nke asọmpi. Ghọta otu ụdị ụlọ ahịa gị na-ejikwa ma debe ndị ahụ.
Okporo ụzọ- Mara ebe okporo ụzọ dị na saịtị gị si abịa na otu esi azụ ahịa a ka ọ bụrụ onye ahịa. Iji mee nke a, jiri ngwaọrụ ndị ga-enyere gị aka kwupụta quantifiable emere ka mbanye àgwà okporo ụzọ jirichaa n'elu n'ịrụ isi mmalite nke Ntuziaka okporo ụzọ.
Akara / Mmata- Ọrụ ndị ahịa na-agbanwe ma ị ga-agbanwe na ya. Ọ dị ezigbo mkpa ka gị na ndị ahịa nwee aha ọma. Ndị ụlọ ọrụ na-achọtakarị ọtụtụ ihe ọhụụ mgbe ị ghọtara atụmanya ndị ahịa yana otu ụlọ ọrụ gị si emezu atụmanya ahụ. Nọgide na ọrụ ndị ahịa gị bụ isi ihe na-eme ka ọnọdụ dị n'ahịa.
Inwe nghọta zuru oke banyere ndị asọmpi gị na-esiwanyewanye ike. Ọ dị oké mkpa iji nọgide na-eji ịdị uchu na-eme nnyocha na asọmpi iji na-hyper-maara nke abụrụ ụdị na gị ahịa ohere. Iji merie na 2018, ụdị ga-etinye uche ha kpọmkwem na ndị ahịa ha bụ na otu esi elekwasị ha anya, ha niile na-eji usoro agha agha.
ChọọJump na-enyere ụlọ ọrụ aka melite itinye ego n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na ebumnuche na-enweghị atụ na nkenke. Ulo oru a na-emeri Traffic Cloud ™ n'elu ikpo okwu na-eji ihe omimi mgbakọ na mwepu echiche (amamịghe echiche) iji nyochaa asọmpi dijitalụ ilekota nke ndi ahia. Ihe ikpo okwu a na eweputara atumatu atumatu nke ebe, otua na mgbe itinye ego dolla iji kwalie uzo di nma gafee uzo, na eme ka ndi ahia ohuru si ndi ndoro-ndoro ochichi.
Tags: amazonBonobosudi ndi na egbu mmaduClub Monacoachorongalaba na-echekwaecommercemacy simallsUzoukwuretaillekwasịrịLohụnanya nke atọEbubeWalmartNa-alụ aghaYandy